Kooxda Guosheng waxaa lagu abaal mariyey “tobanka sare ee faa iidooyinka dhammaystiran ee 2018 ″ ay ka heleen iskaashiga wershadaha mashiinka Shiinaha
waxaa maamula 20-03-25
Ururka waxsoosaarka mashiinada Shiinaha ayaa abaal mariyey tobanka shirkadood ee ugu sareeya sanadka 2018, iyo kooxda guosheng ee tikniyoolajiyadda caqliga leh ayaa la guddoonsiiyay “tobanka shirkadood ee ugu sareeya oo leh faa iidooyin dhaqaale oo dhameystiran”. Shirkadaha guuleysta waxaa ka mid ah afar qalab mashiin goynta birta ah, laba formi ...
Kooxda Guosheng waxay markooda ugu horreysa ka ciyaartaa mashiinka mashiinka caalamiga ah ee Hanover 2019 ee lagu soo bandhigayo Jarmalka
Sebtember 16, 2019, Bandhiga Mashiinka Qalabka Mashiinka ee Jarmalka (EMO2019) ayaa ka furmay xarunta bandhigga caalamiga ah ee hannover. EMO waa bandhig xirfad u leh warshadaha wax soo saarka mashiinka oo ay taageerayaan golaha iskaashiga wershadaha mashiinka yurub. Bandhigu wuxuu ku socdaa ...
La dirir faafa, guosheng in ficil!
La-dagaallanka cudurka faafa, guosheng ayaa ku dhaqma! Amarkii ugu horreeyay ee sannadka cusub - GMF2213T longmen processing Center in iskuduwaha waaxyada dowladda, sida qalabka ka hortagga faafidda ee loogu talagalay gobolka Henan, taageeridda ka hortagga cudurka faafa iyo xakameynta qalabka ...
Guoshengzhike waxaa la gudoonsiiyey cinwaanka tobanka shirkadood ee ugu sareeya shirkad dhiska sayniska iyo teknolojiyadda degmada gangzha
Shirkaddu waxay ku adkaysataa qotoda dheer ee warshadaha qalabka wax soo saarka ee caqliga leh, si ay ula kulmaan baahiyaha isticmaala sida hagida, oo leh cilmi baaris madax banaan iyo horumarin, hal abuurka tikniyoolajiyada sida xoogga wadista, soosaarka caqliga leh si loo sii xoojiyo geedi socodka goynta birta, qaaradaha ...
Guoshengzhike ayaa loo magacaabay "abaalmarinta tayada duqa magaalada nantong"
Nantong guosheng caaqil teknoloji kooxeed co., Ltd. waxay si firfircoon kor ugu qaaddaa hannaanka maaraynta waxqabadka heer sare, waxay wanaajisaa tayada hawlgalka shirkadda iyada oo loo marayo qaab nidaam waxbarasho iyo tababar, waxayna ku guuleysatay horyaallada sharafta leh ee nooca tayada, hoggaanka degmada ...